DAAWO+XOG: Wasiiradda & Xildhibaanada Gedo ee kujira DF Soomaaliya & Madaxweyne Farmaajo maxaa dhexmaray?
MUQDISHO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay wasiiradda iyo xildhibaanada beesha uu ka soo jeedo Wasiirkii Amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo ku xiran Godka Jilicow ee magaalada Muqdisho ay la kulmeen Madaxweyne Farmaajo, si ay arrimahan ugala hadlaan, waxana la xaqiijiyey in ay dagaal cad kusoo kala tageen.
Dadaalo ay wadeen oo ku wajahnaa in lasii daayo Wasiirka Amniga ayaa fashilmay, markii sharuudaha ka yimi dhinaca Madaxtooyada Soomaaliya ay noqdeen kuwa aan la fulin karin, gaar ahaana arrimaha ku wajahan in uu soo wareejiyo ciidamada, uuna la shaqeeyo saraakiisha Itoobiyaamka ah.
Guddi ka socda Beesha uu kasoo jeedo Janan oo la kulmay Taliyaha Nabadsugida Soomaaliya ayuu u sheegay in qorshahan uu ka socdo dhanka Madaxweynaha Federaalka, aysana shaqo ku laheyn Hay`addaha amaanka ee dalka, balse uu yahay amar isaga si toos ah uga yimi.
Sidaas oo kale, wuxuu amray in lasoo xirxiro xubno kale oo ay ku jiraan saaxiibadii Wasiir Janan, haddii ay soo maraan magaalada Muqdisho, gaar ahaana xubnaha hadda kusugan Luuq, Doolow & Balad-Xaawo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa doonaya sidii ula wareegi lahaa ku dhawaad 1000 Askari oo uu maamulayey wasiirka Amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan, isla markaasna ugu weerari lahaa magaalada Kismaayo, balse caqabadaha haysta ayaa ah in aysan wali ku guuleysan dhexgalida ciidamadaas.
Saraakiil kasocota Madaxtooyada Soomaaliya ayaa la xaqiijiyey in ay tageen degmada Balad-Xaawo, iyadoo qorshuhu yahay in ay soo kormeeran xaaladdaha deegaanadaas iyo sida ugu macquulsan ee dhexgal loogu sameyn karro ciidamadii Wasiirka Amniga, sidaas oo kale Jubbaland ayaa u dirtay deegaanka Doolow wafdi kasocda Kismaayo oo ay ku jiraan saraakiil ciidan.
Gudoomiye kuxigeenka Guddiga Xaduudaha & Doorashooyinka Jubbaland Axmed Maxamuud Nuur ayaa shaaciyey in wax kasta oo ka dhasha qorshaha ay wado Dawladda Soomaaliya, gaar ahaana Madaxweyne Farmaajo uu isagu masuuliyadda qaadi doono.
Iska celiya nacaska tuurta leh, shalayna idinkaa doortay. waxase hubaala in uusan dib u soo noqoneyn Xaaraami.